Data momba ny fitondran-tena nomerika: Ny tsiambaratelo hitazona tsara indrindra amin'ny fikolokoloana ny tsara Chord miaraka amin'i Gen Z | Martech Zone
Ny paikady ara-barotra mahomby indrindra dia entin'ny fahatakarana lalina ny olona izay noheverina ho tratrarina. Ary, ny fiheverana ny taona dia iray amin'ireo mpilaza mialoha indrindra ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fihetsika sy ny fitondran-tena, ny mijery amin'ny alàlan'ny solomaso misy ny taranaka dia fomba iray nahasoa tamin'ny mpivarotra mba hametrahana fiaraha-miory amin'ireo mpihaino azy.
Androany, ireo mpanapa-kevitra miankina amin'ny orinasa mandroso dia mifantoka amin'ny Gen Z, teraka taorian'ny 1996, ary ara-dalàna izany. Ity taranaka ity dia hamolavola ny ho avy ary tombanana ho efa ananany sahady $ 143 lavitrisa amin'ny fahefana mandany. Na izany aza, ny habetsaky ny fikarohana ambaratonga voalohany sy faharoa izay natao tamin'ity vondrona ity dia toa tsy dia lasa lavitra loatra.
Na dia fantatry ny besinimaro aza fa ny Gen Z dia maneho ny teratany nomerika marina voalohany, ny fomba fanao mahazatra natao mba hahitana ny filan'izy ireo sy ny hetahetany dia tsy milaza amintsika ny tena hetsika nomerika ataon'izy ireo. Ny famaritana ny paikady ara-barotra amin'ny ho avy izay mamelona dia miankina betsaka amin'ny fahatakarana amin'ny fomba feno ireo olona ireo, izay mampiditra imperative iray: ny marika dia tokony hanitatra ny topimaso ny fananganana fiaraha-miory mba hikajiana ireo lafiny nomerika amin'ny endrik'ity taranaka ity.
Gen Z amin'ny sarany endrika
Mihevitra izahay fa mahalala Gen Z. Izy ireo no taranaka maro karazana indrindra. Miorina tsara izy ireo, feno fanantenana, be zotom-po ary tia miasa. Maniry fandriampahalemana sy fanekena ho an'ny rehetra izy ireo ary hanatsara an'izao tontolo izao. Manana toe-tsaina mpandraharaha izy ireo ary tsy te-hapetraka ao anaty boaty. Ary, mazava ho azy, fa teraka ara-bakiteny izy ireo tamin'ny alàlan'ny finday avo lenta. Mitohy ny lisitra, ao anatin'izany ny marika tsy azo iadian-kevitra fa ny fahatongavan'ny taona mandritra ny krizy COVID-19 dia hijanona amin'ity taranaka ity.
Na izany aza, ny haavon'ny fahalalantsika efa misy dia manimba ny tany ihany noho ny antony roa lehibe:
Ara-tantara, hevi-baovao momba ny taranaka maro - ary ny ampaham-pividianana maro hafa — dia voatsimpona amin'ny alàlan'ny fironana kasaina hatao sy ny valin'ny fanadihadiana. Na dia fitondran-tena mitsikera aza ny fihetsika sy ny fahatsapana voalaza, matetika ny olona dia miady mafy amin'ny fitadidiana ireo zavatra nataony taloha ary tsy afaka mamoaka tsara ny fihetsem-pony foana.
Ny marina amin'ity raharaha ity dia mbola tsy fantatry ny Gen Z hoe iza izy ireo. Ny maha-izy azy ireo dia tanjona kendrena satria eo afovoan'ny dingana mamolavola indrindra amin'ny fiainany izy ireo. Ny toetran'izy ireo amin'ny tenany dia hiova rehefa mandeha ny fotoana - tena lehibe lavitra noho ireo zokiny sy ny taranaka niforona.
Raha mijery isika Millennials ary ny fomba nahadisoantsika azy teo aloha dia miharihary ny lesoka amin'ny fomba lova lova amin'ny fianarana momba ny taranaka maro. Tsarovy fa izy ireo tamin'ny voalohany dia nantsoina hoe manana etika miasa ratsy sy tsy mahatoky, izay fantatray izao fa tsy marina.
Mihady lalina kokoa amin'ny data momba ny fitondran-tena nomerika
Famaritana ny Gen Z misy eo amin'ny fihaonan'ireo nomerika sy fitondran-tena. Ary noho ny fandrosoana ara-teknolojia, sambany hatramin'ny nandalinana ny taranaka nifandimby, ny mpivarotra dia manana fidirana amin'ny angon-drakitra manankarena manankarena izay manome varavarankely ny tena hetsika an-tserasera Gen Z amin'ny antsipiriany be pitsiny. Androany, fitondran-tena niomerika 24/7 an'ny olona an'arivony maro no mandeha an-dàlana nefa azo ekena ihany.
Ny tahirin-kevitra momba ny fitondran-tena nomerika, rehefa ampidirina miaraka amin'ny angona tsy an-tserasera sy voalaza, dia mamorona sary feno fantsona miampita amin'ireo olona ireo izay manontany ny antony sy ny antony. Ary rehefa mahazo io fomba fijery feno io ianao dia mahazo faharanitan-tsaina azo ampiharina izay hamolavola ireo paikady marketing.
Ireto misy fomba vitsivitsy ahafahan'ny angon-drakitra fihetsika dizitaly manampy amin'ny fampitomboana ny fahatakarana sy ny fahamarinan'ny vinavina momba ny Gen Z — na ny ampahan'ny mpanjifa — na inona na inona fahalalana iorenanao.
Fanamarinana tena izy: Mahazoa hevi-baovao amin'ny mpihaino izay tsy fantatrao momba azy, ary zahao ny fizahana raha hijery azy ireo bebe kokoa ianao. Ohatra, azonao atao ny manadihady sokajy sy mpamorona marika. Ary azonao atao ny mianatra ny fihetsiky ny mpanjifa tsy afa-niomerika.
Lafiny vaovao: Manampia sosona amin'ny mpihaino izay efa fantatrao, fa tsy ampy, momba azy. Raha manana fizarana manan-danja sy olona efa napetraka ianao, ny fahafantarana ny zavatra ataon'izy ireo amin'ny Internet dia afaka mamelatra faritra tsy ampoizina.
Fanitsiana: Manala sarona ny tsy fitovian-kevitra amin'ireo valinteny voalaza - manakiana amin'ny tranga izay tsy ahatsiarovan'ny olona tsara ny zavatra nataony taloha.
Mahafantatra amin'ny fomba azo antoka ny fomba fandraisan'ny mpanjifa ny sehatra nomerika midadasika mahery vaika, indrindra ho an'ny marketing nomerika. Ny fampisehoana ny tranonkala iraisana notsidihina, ny fomba fitadiavana, ny fananana fampiharana, ny tantaram-pividianana, ary maro hafa dia mety hanondro ny olona iray, ny zavatra karakarain'izy ireo, ny zavatra iadiany, ary ny zava-mitranga lehibe eo amin'ny fiainana. Miaraka amin'ity fahatsapana Gen Z mahery ity amin'ny nuansa rehetra misy azy ireo, ny mpivarotra dia afaka mametraka fampiroboroboana, mividy haino aman-jery kendrena, manatsara ny fandefasan-kafatra, ary mampifanaraka ny atiny — ankoatry ny zavatra hafa — amin'ny fahatokiana tanteraka.
Ny fahafantarana fa misy izany angona izany fa tsy ny fampiasana azy dia safidy an-tsitrapo ny tsy hahatakatra ny mpanjifa. Izany dia nilaza fa tsy ny loharanom-pahalalana rehetra momba ny fitondran-tena nomerika dia foronina mitovy. Ny tsara indrindra dia:
Misafidy-in, midika hoe ekipan'ny mpandray anjara manaiky fa manaiky ny fitondran-tenany, ary misy ny fifanakalozana sanda ara-drariny eo amin'ny mpikaroka sy ny mpanjifa.
Longitudinal, amin'ireny hetsika ireny dia harahi-maso manodidina ny ora sy ny fotoana, izay afaka manazava ny tsy fivadihana na ny tsy fisian'izany miaraka amin'ny fironana hafa.
matanjaka, mandrafitra ny tontolon'ny fitondran-tena ampy ny habeny mba hanomezana santionany ny hetsika dizitaly ho an'ny mpanjifa sy angon-drakitra ampy ahafahan'ny marika ampiasaina.
Agnostika fitaovana, manome ny fahaizana mandinika ny fihetsika amin'ny desktop sy finday.
Cookie-porofo, midika tsy miankina amin'ny cookies, izay ho lasa fepetra takiana atsy ho atsy.
Rehefa manohy mivoatra ny Gen Z, ny fifandraisan'izy ireo amin'ny sehatra nomerika dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fampianarana ireo mpivarotra momba ny fomba fivoarana miaraka amin'izy ireo, hahazoana ny fitokisany ary hananganana fifandraisana maharitra. Ny marika tsara indrindra dia handray ity refy data vaovao ity ho toy ny refy vaovao hanararaotana mifaninana, tsy amin'ny fanajana ny paikady miatrika ny Gen Z ihany, fa ny mpihaino kendrena rehetra.
Tags: fahitana ny mpihainoangona momba ny fitondran-tenaCookiescross-fantsonaangona momba ny fitondran-tena nomerikagen ztaranaka ztaranakaangona geografikamillennialsmisafidy-infanitsiana